Semalt Expert: Fahalalana sy fahombiazana Gehen zusammen
Amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny aterineto, ny maha-zava-dehibe ny mpanatrika dia singa manan-danja tsy misy mpitoraka blaogy afaka misafidy. Io no iray amin'ireo tranga izay manaporofo ny votoatin'ny votoaty ary koa ny fitomboan'ny famakiana ny mombamomba anao. Ankoatr'izay, Google dia nanambara fa ny manan-danja votoaty dia ho singa lehibe amin'ny algorithm Google momba ny fisavana - new agri-technology applications. Ny fahaiza-mamaky ny votoatinao dia mety ho lanjany lehibe eo amin'ny sokajy Search Engine Optimization (SEO). Maro ireo orinasa mahomby manana orinasa SEO izay manampy azy ireo hampivoatra ny votoatin'ny sary, manazava ny fahombiazan'ny tranonkalan'ny e-commerce. Ireo mpampiasa dia tokony hampiasa ny lanjan'ny votoaty amin'ny sehatra samihafa, toy ny fitomboan'ny famakiana ny blôginao.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia lasa tsy mendrika ny votoaty rehefa ela loatra. Amin'ny ankamaroan'ny bolongana dia tokony ho eo anelanelan'ny 500 ka hatramin'ny 700 ny votoaty mba hahatonga ny habaka amin'ny habaka ao anaty pejy. Ity ambany ity dia mety ho ambany noho ny fampiharana sasany toy ny takelaka finday. Tadidio ny famoahana ny algorithm Google amin'ny 2017 ny famoahana ireo tranonkala mahafinaritra. Ho an'ny pejy informatika, ny votoaty dia mety ho mihoatra ny 700 teny. Na dia izany aza, hafatra amin'ny teny maherin'ny 1300 dia lava loatra ny olona iray hamaky. Ny ankamaroan'ny olona mijery ny tranonkala dia mazàna no mihazona ny fifantohan-tsaina. Ny fidirana ao amin'ny tranonkalanao dia mety handratra ny sasany amin'ireo ezaka SEO anao.
Jason Adler, Semalt Mpitarika Success Successor, dia manolotra ny sainao ireto fomba manaraka ireto azonao atao ny mametraka lahatsoratra lava:
1. Mampiasa andian-tantara.
Azo atao tsara ny mandika ny vaovao amin'ny andian-tsambo..Mety hahitana andian-javatra maromaro izay ahafahana mampifandray ny mpamaky ambony. Ny mpiserasera sasany dia maniry ny hampiditra fehintsoratra sy fampidirana mivantana. Ity sehatra ity dia mamela ny olona handrava ilay lahatsoratra manontolo ho fizarana, izay ny ampahany voalohany dia tokony hahitana ny hevi-dehibe ao amin'ilay lahatsoratra.
Diarin'ny sarimihetsika dia manome ny infografika amin'ny mpampiasa iray manazava ny ankamaroan'ny foto-kevitra. Ny fisainan'ny olombelona dia afaka mitadidy ireo sary mamaivay kokoa noho ny votoaty voasoratra. Diarin'ny sarimihetsika dia manoritsoritra ny filazalazana momba ny fomba mety hitranga. Ankoatra izany, dia azo jerena ao amin'ny votoatin'ny horonantsary ny fampisehoana an-tsarimihetsika, izay mety ho mora ampiasaina ny lesona sy ny tranonkala.
Ny lahatsary dia mety ho hevitra tena tsara. Ny sarimihetsika dia mety ho mendrika mihoatra noho ny teny an'arivony. Ity fomba fiasa ity dia tsy afaka ny hampiditra ny habetsaky ny votoatiny fotsiny ihany fa hamerina ny mpamaky hijanona ao amin'ny pejinao ihany koa. Ankoatra izany, Google dia mandinika lahatsary ho votoaty an-tsoratra. Ny horonan-tsary dia miseho amin'ny endritsy hafa izay afaka mampitombo ny fitomboan'ny tranonkala. Ny tranokalan'ny votoaty ihany koa dia maimaim-poana amin'ny ankamaroan'ny tranonkala.
Ny ankamaroan'ny orinasa dia mahatsapa ny fahasarotana amin'ny famolavolana votoaty ho an'ny mpamaky azy. Maro ireo seo SEO no mamoaka ny votoatiny amin'ny tranonkala mahaleotena izay tsy voatery midika ho fahombiazana amin'ny tranonkala. Ankoatr'izay, raha ny fampahalalana dia manohy ny fifindran'ny olona ho an'ny olona, ​​ny fahamendrehan'ny tanjon'ny tanjonao dia mamindra amin'ny fotoana. Ity lafiny iray ity dia afaka manazava ny tsy fahombiazan'ny fanentanana SEO sasany. Ity toro-lalana ity dia manana lesona azo raisina izay afaka manatsara ny kalitaon'ny hafatrao. Vokatr'izany, afaka mandray soa avy amin'izany fahombiazana izany ny mpihaino anao ary manao dingana maro momba ny famoronana votoaty. Azonao ampiasaina ity toro-lalana ity mba hampitombo ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitry ny varotra.